မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
Posted on April 16, 2017 by Bay Din War Tanar Oh
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး.
ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်းကို အကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးသော မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၉ ခုနှစ်တွင် …..
ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ဟော်တယ်လုပ်ငန်း၊ရေကြောင်းခရီးနှင့်ပက်သက်သောလုပ်ငန်း၊ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်း ၊ သင်္ဘောသားနှင့်ပက်သက်သောလုပ်ငန်း ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ကုန်သည်ကြီးအလုပ်၊ပွဲစားအလုပ်၊အသံကိုအသုံးချရသောအလုပ်၊စကားပြောရသောအလုပ်၊လှုပ်ရှားရသောအလုပ်၊သစ်၊သံ၊သွပ်၊သစ်သီး၊သီးနှံ လုပ်ငန်းများ …။ ပညာကိုအသုံးချရသောအလုပ်၊ပညာရေးအလုပ်၊ဆရာအလုပ်၊မြေ၊ဖုန်း၊မုန့်၊ပဲ၊ပြောင်း၊ဖယောင်း၊ပန်းချီ၊ပန်းပု၊ပန်းထိမ် လုပ်ငန်းများ ….။ အလှအပ၊အနုပညာ၊လက်မှုပညာ၊ရွှေ၊ရတနာ၊ရေနံ၊ရေလုပ်ငန်း၊ရေသန့်၊လက်ဖက်ရည်၊အအေး၊အဖျော်ယမကာ၊ဘီယာ၊ယုံစုံ လုပ်ငန်းများ …. အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်လတ္တံ့။မိမိတို့ရည်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအောင်မြင်လတ္တံ့။လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဆောင်ရွက်သင့်အံ့။
ဆန်၊စပါး၊ဆီ၊ဆေး၊ဆား၊စိန်၊စက်မှုလက်မှု၊စားသောက်ကုန်၊စားသောက်ဆိုင်၊စတိုးဆိုင်၊စက်ချုပ်၊စိုက်ပျိုးရေး၊စာပေ၊စာရေးကိရိယာ၊စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ …။ ငွေ၊ခြံ၊ကား၊ကျောက်မျက်၊ကုန်သည်လေး၊ကွန်ပြူတာ၊ကွမ်းသီးကွမ်းယာပစ္စည်း၊ကုန်ခြောက်၊ကုန်စုံ၊ကြက်ဥ၊ကြက်သား၊ကြက်မွေးမြူရေး၊ငါးပိ၊ငါးခြာက်၊ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ …. အလယ်အလတ် ပုံမှန်တန်းတွင်သာရှိနေလတ္တံ့။မိမိရည်မှန်းထားသလောက်သာအောင်မြင်အံ့။ လူအားစိုက်ထုတ်ပြီး များများကြိုးစားအားထုတ်သင့်အံ့။
အိုးအိမ်၊အဆောက်အဦး၊ဆောက်လုပ်ရေး၊အုတ်၊သဲ၊ကျောက်၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊အုပ်ချုပ်ရေး၊ဥပဒေ၊အိမ်ခြံ၊မြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများ ….။ အထည်အလိပ်၊ထီး၊ဖိနပ်၊နာရီ၊ဦးထုပ်၊လူမျိုးခြား၊နိုင်ငံခြား၊မီး၊လျှပ်စစ်၊အပူ၊ဓါတ်ငွေ့၊ဒီဇယ်၊နွားနို့၊ဒိန်ချဉ်၊နို့ဆီ၊ဓါတ်ပုံ၊ထီလုပ်ငန်း၊ထုံးလုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်းများ … ထစ်ငေါ့၊လွဲချော်ခြင်း၊ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊စိတ်ပူပန်ရခြင်းများဖြစ်တတ်သည့်အတွက် အစစအရာရာသတိထားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်အံ့။
လူရောစိတ်ပါ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာရည်ရွယ်ချက်များကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။ အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ၊အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ဘ၀ခံယူချက်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်အံ့။ ဆန့်ကျင့်ဘက်လိင်များထံမှ အကူအညီကောင်းများရလတ္တံ့။ အဖက်ဖက်တွင် အလွန်အမင်းလည်းကောင်းနိုင်သလို၊အလွန်အမင်းလည်းညံ့သွားလတ္တံ့။
အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ညစ်စရာ အရှုပ်အရှင်းပြဿနာများကြုံရတွေတတ်။မိမိချစ်သူ ၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ အထင်မြင်လွဲမှားခြင်းကိုခံရတတ်ခြင်း။အပျို၊လူပျိုများ မလွပ်လပ်သူများနှင့်ငြိစွန်းလွယ်တတ်သည့်အတွက် သတိပြုအံ့။
အထူးယတြာ။ ။တနင်္ဂနွေနေ့ည၀တ်အိပ်ထားသော အ၀တ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
ယတြာ။ ။ မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက် (၆)နာရီ (၅၀)မိနစ်တိတိတွင် သပြေ(၆)ညွန့်၊ပေါင်မုန့်(၅)ချပ်၊ကော်ဖီ(၂)ခွက် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏလှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီး ငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရလတ္တံ့။
အပျိုလူပျိုများ အတိတ်ဘ၀က ဆုတောင်းရှိခဲ့ဖူးသော အချစ်ဟောင်း အဆက်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ မိမိကိုစိတ်ဝင်စား ချစ်ကြိုက်နေသူများ အများအပြားပေါ်လာလတ္တံ့။ မိမိချစ်သူ ၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ သ၀န်တိုခြင်းကို ခံရအံ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးစီးပွားဥစ္စာများ တိုးပွားလတ္တံ့။
ယတြာ။ ။မည်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ(၆)မိနစ်တိတိတွင် နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊သပြေ(၆)ညွန့်၊ဆီအစိမ်းဆမ်းထားသော ဆွမ်းပူပူ(၃)ပန်းကန် ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် မကြာခဏ လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
ကျန်းမာရေးချူခြာခြင်း၊ဆေးရုံဆေးခန်းများနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊ဘာမှန်းမသိ ရောဂါရှာမရပဲ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊အစားမှားဆေးမှားဖြစ်ခြင်း၊စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း၊စကားပြောကျွံခြင်း လွန်ခြင်း ၊ စက်ပစ္စည်း ၊ စာရွက်စာတမ်း ၊စပ်တူရှယ်ယာကိစ္စများနှင့်ပက်သက်ပြီး စိတ်ညစ်ရတတ်ခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ စိတ်ကူးအကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို စွန့်စွန့်စားစား ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှင် အောင်မြင်လတ္တံ့။ အိပ်ယာပြောင်းအိပ်ခြင်း၊ခရီးထွက်ခြင်း စသည့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ဆောင်ရွက်ပါက ကံကောင်းလတ္တံ့။
အချစ်ရေး ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဖြင့် ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်တတ်ခြင်း ၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း ၊ ချစ်သူပါပြောင်းသွားတတ်ခြင်း တို့ကြုံရလတ္တံ့။ အိမ်ထောင်ရေး မကြာခဏဆိုသလို ခွဲခွာနေလျှင် အညံ့များပြေပျောက်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးသုခများခံစားရလတ္တံ့။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားရှိလျှင် အထူးပြုလုပ်သင့်သော ယတြာ … အင်္ဂါနေ့ည၀တ်အိပ်ထားသော အ၀တ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီ(၁၀)မိနစ်တိတိတွင် အုန်း(၆)ညွန့်၊နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊လက်ဖက်ရည်(၄)ခွက်ကို နေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
ဘ၀တစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားအံ့။စီးပွားတက်အံ့။ ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ၊ အခြေအနေကောင်း ၊ အဆက်အသွယ်ကောင်း ၊ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်း ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများရလတ္တံ့။ကောင်းသောအကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်လတ္တံ့။နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျောဇောထင်ရှားအံ့။အကောင်းပြော ချီးမွမ်းခံရလတ္တံ့။တရားထူးအသိထူးရအံ့။ရာထူးတိုးလစာတိုးခြင်း၊အလုပ်နေရာကောင်းရရှိခြင်းများကြုံလတ္တံ့။
အပျို၊လူပျိုများ မိမိကိုကြင်နာတတ်သူ မိမိကိုတန်ဖိုးထားသူများနှင့်ချစ်သူဖြစ်ရတတ်။ မိမိထက်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသူ ချမ်းသာသူများနှင့် ဖူးစာဆုံ အိမ်ထောင်ကျလတ္တံ့။အိမ်ထောင်ရေး အိမ်ထောင်ဖက်၏ ဂရုစိုက်ခြင်း၊အလိုလိုက်ခြင်း၊ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကို ခံရလတ္တံ့။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၅)နာရီ (၁၀)မိနစ် တိတိတွင် အုန်း(၆)ညွန့်၊ပန်းအ၀ါ(၅)ပွင့် ၊ ကော်ဖီ(၂)ခွက် ၊ ကိတ်မုန့်(၂)ချပ်ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း ၊ မင်းစိုးရာဇာကူညီမစခြင်း၊ပက်သက်ရခြင်း ၊ အလုပ်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ရန်အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင်များပေါများပြီး ၄င်းတို့အပေါ် ကံအသာစီး အနိုင်ရရှိခြင်း၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း ၊ မိမိကိုကြည်ညိုလေးစားချစ်ခင်သူများပေါများခြင်း၊အပျို၊လူပျိုများ လူလိမ်ခံရတတ်ခြင်း ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရခြင်း တို့ ကြုံရလတ္တံ့။
အချစ်ရေးကံကောင်းနေသော်လည်း မိန်းမလည် ယောင်္ကျားရှုပ်များနှင့်တွေ့ရတတ်ခြင်းကို သတိပြုအံ့။အိမ်ထောင်ရေး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီး ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်မှုတွေ များနေအံ့။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၆)နာရီ (၂၀) မိနစ်တိတိတွင် ဇော်စိမ်း(၃)ညွန့်၊ ကံကော်(၂)ညွန့် သစ်သီး(၆)လုံးကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
ကံဇာတာပွင့်လန်းတိုးတက်အံ့။လုပ်သမျှ ကြံသမျှ အောင်မြင်ထမြောက်လတ္တံ့။ အကြံအစည် ရည်ရွယ်ချက်များကို မြန်ြမန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်အံ့။စီးပွားလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့်အားနှင့်တိုးချဲ့သင့်အံ့။ စုတ်ရော လာဘ်ရောပွင့်နေအံ့။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်း ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း ထင်ပေါ်ကျောဇောခြင်း ၊ အကောင်းပြောချီးမွမ်းခံရခြင်း ၊ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံး နှင့် ကံတရား၏ မျက်နှာသာပေးခြင်းကို ခံရခြင်း ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့၏ ကူညီမစခြင်းခံရခြင်း ၊ လူအများ ပရိတ်သတ်နှင့် လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်များတွင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်မြင်ခြင်း တို့ မုချကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။
အပျိုလူပျိုများ မျက်နှာပွင့်လန်းပြီး စိတ်ဝင်စားသူများ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေအံ့။အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းနေသော်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားကို အထူးဂရုစိုက်ထိမ်းသိမ်းသင့်။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၇)နာရီတိတိတွင် ရွက်လှ(၄)ညွန့်၊ ဇော်စိမ်း(၃)ညွန့် နွားနို့(၁)ခွက်ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။ အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာအပြောင်းအလဲများကြုံရလတ္တံ့။ မိမိ၏ ဘ၀ခံယူချက်များ ၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆများ ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားများ ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များလည်း ပြောင်းလဲအံ့။ အမှန်ဘက်ကနေ စကားပြောငြင်းခုန်ရခြင်း ၊ ဆေးရုံဆေးခန်း၊အမှုအချုပ်၊ထောင်ဂတ်များနှင့်ပက်သက်ရခြင်း၊အနားဝန်းကျင်တွင် မီးလန့်ရှော့ဖြစ်ကြုံရတတ်ခြင်း ၊ သူများပြဿနာကြားဝင် ခေါင်းခံဖြေရှင်းပေးရခြင်းတို့ ကြုံရလတ္တံ့။
အပျိုလူပျိုများ အချစ်ရေးတွင် မကြာခဏဆိုသလို စကားပြောငြင်းခုန်ဖြေရှင်းရခြင်း ၊ ပူပန်သောကရောက်ရခြင်း တို့ကြုံရအံ့။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ မကြာခဏဆိုသလို အသေးအဖွဲကိစ္စလေးမှအစ ကတောက်ကဆဖြစ်ရခြင်း တို့ ကြုံတွေ့ရလတ္တံ့။
အထူးလိုက်နာရန် … ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ရန် ဘာသာရေးပိုလုပ်သင့်၊မေတ္တာစိတ်မွေးသင့်၊မကြာခဏအိပ်ယာပြောင်းအိပ်သင့်။ခရီးခဏခဏထွက်သင့်။
အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားများ ကြုံတွေ့ရပါလျှင် …. စနေနေ့ည၀တ်အိပ်ထားသော အ၀တ်ဟောင်းတစ်စုံကို နောက်နေ့မနက်စော လမ်းတွင်သွားစွန့်ပါ။ (ငါ့မှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ) (၂)လတစ်ခါလုပ်ပါ။အရေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လျှင်ထပ်လုပ်ပါ။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၅)နာရီ(၄၀)မိနစ်တိတိတွင် ရွက်လှ(၄)ညွန့်၊ အုန်း(၆)ညွန့် ပေါင်မုန့်(၅)ချပ်ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။
နှစ်ဟောင်းကုန်၍ နှစ်သစ်ကိုကြိုလင့်သော နှစ်သစ်ကူးအခါသမယ၏ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသော ဧပြီလ၏နေ့ရက်များ
မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ (၁)နှဈစာ ဟောစာတမျးကွီး
ပုပ်ပါးစောရဟနျးမငျးကို အကွောငျးပွုပွီးရေးထိုးသော မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၃၇၉ ခုနှဈတှငျ …..
ခရီးသှားလုပျငနျး၊ဟျောတယျလုပျငနျး၊ရကွေောငျးခရီးနှငျ့ပကျသကျသောလုပျငနျး၊ရထှေကျကုနျလုပျငနျး ၊ သင်ျဘောသားနှငျ့ပကျသကျသောလုပျငနျး ၊ သတ်တုတူးဖျောရေးလုပျငနျး၊သယျယူပို့ဆောငျရေးလုပျငနျး၊ကုနျသညျကွီးအလုပျ၊ပှဲစားအလုပျ၊အသံကိုအသုံးခရြသောအလုပျ၊စကားပွောရသောအလုပျ၊လှုပျရှားရသောအလုပျ၊သဈ၊သံ၊သှပျ၊သဈသီး၊သီးနှံ လုပျငနျးမြား …။ ပညာကိုအသုံးခရြသောအလုပျ၊ပညာရေးအလုပျ၊ဆရာအလုပျ၊မွေ၊ဖုနျး၊မုနျ့၊ပဲ၊ပွောငျး၊ဖယောငျး၊ပနျးခြီ၊ပနျးပု၊ပနျးထိမျ လုပျငနျးမြား ….။ အလှအပ၊အနုပညာ၊လကျမှုပညာ၊ရှေ၊ရတနာ၊ရနေံ၊ရလေုပျငနျး၊ရသေနျ့၊လကျဖကျရညျ၊အအေး၊အဖြျောယမကာ၊ဘီယာ၊ယုံစုံ လုပျငနျးမြား …. အထူးအကြိုးပေးအောငျမွငျလတ်တံ့။မိမိတို့ရညျမှနျးထားသညျထကျ ပိုမိုအောငျမွငျလတ်တံ့။လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ ဆောငျရှကျသငျ့အံ့။
ဆနျ၊စပါး၊ဆီ၊ဆေး၊ဆား၊စိနျ၊စကျမှုလကျမှု၊စားသောကျကုနျ၊စားသောကျဆိုငျ၊စတိုးဆိုငျ၊စကျခြုပျ၊စိုကျပြိုးရေး၊စာပေ၊စာရေးကိရိယာ၊စပျတူရှယျယာ လုပျငနျးမြား …။ ငှေ၊ခွံ၊ကား၊ကြောကျမကျြ၊ကုနျသညျလေး၊ကှနျပွူတာ၊ကှမျးသီးကှမျးယာပစ်စညျး၊ကုနျခွောကျ၊ကုနျစုံ၊ကွကျဥ၊ကွကျသား၊ကွကျမှေးမွူရေး၊ငါးပိ၊ငါးခွာကျ၊ငါးမှေးမွူရေး လုပျငနျးမြား …. အလယျအလတျ ပုံမှနျတနျးတှငျသာရှိနလေတ်တံ့။မိမိရညျမှနျးထားသလောကျသာအောငျမွငျအံ့။ လူအားစိုကျထုတျပွီး မြားမြားကွိုးစားအားထုတျသငျ့အံ့။
အိုးအိမျ၊အဆောကျအဦး၊ဆောကျလုပျရေး၊အုတျ၊သဲ၊ကြောကျ၊အိမျဆောကျပစ်စညျး၊အိမျထောငျပရိဘောဂ၊အုပျခြုပျရေး၊ဥပဒေ၊အိမျခွံ၊မွအေကြိုးဆောငျ လုပျငနျးမြား ….။ အထညျအလိပျ၊ထီး၊ဖိနပျ၊နာရီ၊ဦးထုပျ၊လူမြိုးခွား၊နိုငျငံခွား၊မီး၊လြှပျစဈ၊အပူ၊ဓါတျငှေ့၊ဒီဇယျ၊နှားနို့၊ဒိနျခဉျြ၊နို့ဆီ၊ဓါတျပုံ၊ထီလုပျငနျး၊ထုံးလုပျငနျး စသညျ့လုပျငနျးမြား … ထဈငေါ့၊လှဲခြျောခွငျး၊ထိခိုကျဆုံးရှုံးခွငျး၊စိတျပူပနျရခွငျးမြားဖွဈတတျသညျ့အတှကျ အစစအရာရာသတိထားပွီး လုပျဆောငျသငျ့အံ့။
လူရောစိတျပါ တညျငွိမျစှာဖွငျ့ လုပျငနျးဆောငျတာရညျရှယျခကျြမြားကို ကွိုးစားဆောငျရှကျလြှငျ အောငျမွငျလတ်တံ့။ အလုပျနရော၊အိမျနရော၊အတှေးအချေါအယူအဆ၊ဘဝခံယူခကျြမြား အပွောငျးအလဲဖွဈအံ့။ ဆနျ့ကငျြ့ဘကျလိငျမြားထံမှ အကူအညီကောငျးမြားရလတ်တံ့။ အဖကျဖကျတှငျ အလှနျအမငျးလညျးကောငျးနိုငျသလို၊အလှနျအမငျးလညျးညံ့သှားလတ်တံ့။
အခဈြရေး၊အိမျထောငျရေး စိတျညဈစရာ အရှုပျအရှငျးပွဿနာမြားကွုံရတှတေတျ။မိမိခဈြသူ ၊ မိမိအိမျထောငျဖကျ၏ အထငျမွငျလှဲမှားခွငျးကိုခံရတတျခွငျး။အပြို၊လူပြိုမြား မလှပျလပျသူမြားနှငျ့ငွိစှနျးလှယျတတျသညျ့အတှကျ သတိပွုအံ့။
အထူးယတွာ။ ။တနင်ျဂနှနေညေ့ဝတျအိပျထားသော အဝတျဟောငျးတဈစုံကို နောကျနမေ့နကျစော လမျးတှငျသှားစှနျ့ပါ။ (ငါ့မှာရှိနတေဲ့မကောငျးတဲ့အခိုကျအညံ့တှအေားလုံး ပါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ) (၂)လတဈခါလုပျပါ။အကွောငျးကိစ်စပျေါလြှငျထပျလုပျပါ။
ယတွာ။ ။ မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ (၆)နာရီ (၅၀)မိနဈတိတိတှငျ သပွေ(၆)ညှနျ့၊ပေါငျမုနျ့(၅)ခပျြ၊ကျောဖီ(၂)ခှကျ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏလှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
အတိတျကံကိုအကွောငျးပွုပွီး ငှအေစုလိုကျအပုံလိုကျရခွငျး၊ထီဆုကွီးပေါကျခွငျး၊ခွံ၊ကား၊ကြောကျ ကောငျးသောဝငျခွငျးတှငျရှိလတ်တံ့။ အခဈြရေးမတ်ေတာရေးကံကောငျးခွငျး၊မကျြနှာပှငျ့ စနျးပှငျ့ခွငျး၊ငှကွေေးဥစ်စာပစ်စညျးမြား စုဆောငျးတိုးပှားခွငျးတို့ကွုံရလတ်တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတျကံ အကောငျးအဆိုး နှဈမြိုးစလုံး၏ အကြိုးကို တှကွေုံ့ခံစားရလတ်တံ့။
အပြိုလူပြိုမြား အတိတျဘဝက ဆုတောငျးရှိခဲ့ဖူးသော အခဈြဟောငျး အဆကျဟောငျးမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံတှရေ့လတ်တံ့။ မိမိကိုစိတျဝငျစား ခဈြကွိုကျနသေူမြား အမြားအပွားပျေါလာလတ်တံ့။ မိမိခဈြသူ ၊ မိမိအိမျထောငျဖကျ၏ သဝနျတိုခွငျးကို ခံရအံ့။ အိမျထောငျဖကျကိုအကွောငျးပွု၍ ငှကွေေးစီးပှားဥစ်စာမြား တိုးပှားလတ်တံ့။
ယတွာ။ ။မညျသညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ(၆)မိနဈတိတိတှငျ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊သပွေ(၆)ညှနျ့၊ဆီအစိမျးဆမျးထားသော ဆှမျးပူပူ(၃)ပနျးကနျ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ မကွာခဏ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
ကနျြးမာရေးခြူခွာခွငျး၊ဆေးရုံဆေးခနျးမြားနှငျ့ပကျသကျရခွငျး၊ဘာမှနျးမသိ ရောဂါရှာမရပဲ တရှောငျရှောငျဖွဈခွငျး၊အစားမှားဆေးမှားဖွဈခွငျး၊စကားပွောငွငျးခုနျရခွငျး၊ခိုကျရနျဖွဈပှားတတျခွငျး၊စကားပွောကြှံခွငျး လှနျခွငျး ၊ စကျပစ်စညျး ၊ စာရှကျစာတမျး ၊စပျတူရှယျယာကိစ်စမြားနှငျ့ပကျသကျပွီး စိတျညဈရတတျခွငျး တို့ကွုံရအံ့။ စိတျကူးအကွံအစညျ ရညျရှယျခကျြမြားကို စှနျ့စှနျ့စားစား ကွိုးစားဆောငျရှကျလြှငျ အောငျမွငျလတ်တံ့။ အိပျယာပွောငျးအိပျခွငျး၊ခရီးထှကျခွငျး စသညျ့ လှုပျလှုပျရှားရှားနထေိုငျဆောငျရှကျပါက ကံကောငျးလတ်တံ့။
အခဈြရေး ရနျဖွဈလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျဖွငျ့ ဂဏာမငွိမျဖွဈတတျခွငျး ၊ စိတျအပွောငျးအလဲမွနျခွငျး ၊ ခဈြသူပါပွောငျးသှားတတျခွငျး တို့ကွုံရလတ်တံ့။ အိမျထောငျရေး မကွာခဏဆိုသလို ခှဲခှာနလြှေငျ အညံ့မြားပွပြေောကျပွီး အိမျထောငျရေးသုခမြားခံစားရလတ်တံ့။
အခကျအခဲကွီးကွီးမားမားရှိလြှငျ အထူးပွုလုပျသငျ့သော ယတွာ … အင်ျဂါနညေ့ဝတျအိပျထားသော အဝတျဟောငျးတဈစုံကို နောကျနမေ့နကျစော လမျးတှငျသှားစှနျ့ပါ။ (ငါ့မှာရှိနတေဲ့မကောငျးတဲ့အခိုကျအညံ့တှအေားလုံး ပါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ) (၂)လတဈခါလုပျပါ။အရေးအကွောငျးကိစ်စပျေါလြှငျထပျလုပျပါ။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီ(၁၀)မိနဈတိတိတှငျ အုနျး(၆)ညှနျ့၊နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊လကျဖကျရညျ(၄)ခှကျကို နအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
ဘဝတဈဆငျ့ခြိုးပွောငျးလဲမွငျ့တကျသှားအံ့။စီးပှားတကျအံ့။ ကွီးပှားတိုးတကျအောငျမွငျခမျြးသာမညျ့ အခှငျ့အလမျးကောငျး ၊ အခွအေနကေောငျး ၊ အဆကျအသှယျကောငျး ၊ အကွံကောငျးဉာဏျကောငျး ၊ မိတျကောငျးဆှကေောငျးမြားရလတ်တံ့။ကောငျးသောအကွံအစညျရညျရှယျခကျြမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။နာမညျဂုဏျသတငျးကြောဇောထငျရှားအံ့။အကောငျးပွော ခြီးမှမျးခံရလတ်တံ့။တရားထူးအသိထူးရအံ့။ရာထူးတိုးလစာတိုးခွငျး၊အလုပျနရောကောငျးရရှိခွငျးမြားကွုံလတ်တံ့။
အပြို၊လူပြိုမြား မိမိကိုကွငျနာတတျသူ မိမိကိုတနျဖိုးထားသူမြားနှငျ့ခဈြသူဖွဈရတတျ။ မိမိထကျအဆငျ့အတနျးမွငျ့မားသူ ခမျြးသာသူမြားနှငျ့ ဖူးစာဆုံ အိမျထောငျကလြတ်တံ့။အိမျထောငျရေး အိမျထောငျဖကျ၏ ဂရုစိုကျခွငျး၊အလိုလိုကျခွငျး၊ကောငျးကြိုးပွုခွငျးကို ခံရလတ်တံ့။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၅)နာရီ (၁၀)မိနဈ တိတိတှငျ အုနျး(၆)ညှနျ့၊ပနျးအဝါ(၅)ပှငျ့ ၊ ကျောဖီ(၂)ခှကျ ၊ ကိတျမုနျ့(၂)ခပျြကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
အကွံအစညျရညျရှယျခကျြမြားအောငျမွငျခွငျး ၊ မငျးစိုးရာဇာကူညီမစခွငျး၊ပကျသကျရခွငျး ၊ အလုပျတိုငျးနရောတိုငျးမှာ ရနျအတိုကျအခံ အပွိုငျအဆိုငျမြားပေါမြားပွီး ၄ငျးတို့အပျေါ ကံအသာစီး အနိုငျရရှိခွငျး၊ အခွှအေရံပေါမြားခွငျး ၊ မိမိကိုကွညျညိုလေးစားခဈြခငျသူမြားပေါမြားခွငျး၊အပြို၊လူပြိုမြား လူလိမျခံရတတျခွငျး ၊ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြားလကျဆောငျရခွငျး တို့ ကွုံရလတ်တံ့။
အခဈြရေးကံကောငျးနသေျောလညျး မိနျးမလညျ ယောကငြ်ျားရှုပျမြားနှငျ့တှရေ့တတျခွငျးကို သတိပွုအံ့။အိမျထောငျရေး ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုအားနညျးပွီး ဖုံးကှယျဟနျဆောငျမှုတှေ မြားနအေံ့။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၆)နာရီ (၂၀) မိနဈတိတိတှငျ ဇျောစိမျး(၃)ညှနျ့၊ ကံကျော(၂)ညှနျ့ သဈသီး(၆)လုံးကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
ကံဇာတာပှငျ့လနျးတိုးတကျအံ့။လုပျသမြှ ကွံသမြှ အောငျမွငျထမွောကျလတ်တံ့။ အကွံအစညျ ရညျရှယျခကျြမြားကို မွနျွမနျဆနျဆနျ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျသငျ့အံ့။စီးပှားလုပျငနျးမြားကို အငျနှငျ့အားနှငျ့တိုးခြဲ့သငျ့အံ့။ စုတျရော လာဘျရောပှငျ့နအေံ့။ ပွညျတှငျးပွညျပခရီးကိစ်စမြားအောငျမွငျခွငျး ၊ နာမညျဂုဏျသတငျး ထငျပျေါကြောဇောခွငျး ၊ အကောငျးပွောခြီးမှမျးခံရခွငျး ၊ သကျရှိသကျမဲ့အားလုံး နှငျ့ ကံတရား၏ မကျြနှာသာပေးခွငျးကို ခံရခွငျး ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတို့၏ ကူညီမစခွငျးခံရခွငျး ၊ လူအမြား ပရိတျသတျနှငျ့ လုပျဆောငျရသောအလုပျမြားတှငျ ကွီးကွီးကယျြကယျြအောငျမွငျခွငျး တို့ မုခကြွုံတှရေ့လတ်တံ့။
အပြိုလူပြိုမြား မကျြနှာပှငျ့လနျးပွီး စိတျဝငျစားသူမြား ၀ိုငျးဝိုငျးလညျနအေံ့။အိမျထောငျရှိသူမြား အိမျထောငျရေးကံကောငျးနသေျောလညျး ကိုယျကငျြ့တရားကို အထူးဂရုစိုကျထိမျးသိမျးသငျ့။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၇)နာရီတိတိတှငျ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့၊ ဇျောစိမျး(၃)ညှနျ့ နှားနို့(၁)ခှကျကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
ဘဝတဈခုလုံးအတှကျ ကွီးမားသောအပွောငျးအလဲမြားကွုံတှရေ့လတ်တံ့။ အလုပျနရော၊အိမျနရောအပွောငျးအလဲမြားကွုံရလတ်တံ့။ မိမိ၏ ဘဝခံယူခကျြမြား ၊ အတှေးအချေါအယူအဆမြား ၊ ကိုယျကငျြ့တရားမြား ၊ လုပျနညျးလုပျဟနျမြားလညျး ပွောငျးလဲအံ့။ အမှနျဘကျကနေ စကားပွောငွငျးခုနျရခွငျး ၊ ဆေးရုံဆေးခနျး၊အမှုအခြုပျ၊ထောငျဂတျမြားနှငျ့ပကျသကျရခွငျး၊အနားဝနျးကငျြတှငျ မီးလနျ့ရှော့ဖွဈကွုံရတတျခွငျး ၊ သူမြားပွဿနာကွားဝငျ ခေါငျးခံဖွရှေငျးပေးရခွငျးတို့ ကွုံရလတ်တံ့။
အပြိုလူပြိုမြား အခဈြရေးတှငျ မကွာခဏဆိုသလို စကားပွောငွငျးခုနျဖွရှေငျးရခွငျး ၊ ပူပနျသောကရောကျရခွငျး တို့ကွုံရအံ့။ အိမျထောငျရှိသူမြား မကွာခဏဆိုသလို အသေးအဖှဲကိစ်စလေးမှအစ ကတောကျကဆဖွဈရခွငျး တို့ ကွုံတှရေ့လတ်တံ့။
အထူးလိုကျနာရနျ … ကောငျးသောအပွောငျးအလဲမြားဖွဈရနျ ဘာသာရေးပိုလုပျသငျ့၊မတ်ေတာစိတျမှေးသငျ့၊မကွာခဏအိပျယာပွောငျးအိပျသငျ့။ခရီးခဏခဏထှကျသငျ့။
အခကျအခဲကွီးကွီးမားမားမြား ကွုံတှရေ့ပါလြှငျ …. စနနေညေ့ဝတျအိပျထားသော အဝတျဟောငျးတဈစုံကို နောကျနမေ့နကျစော လမျးတှငျသှားစှနျ့ပါ။ (ငါ့မှာရှိနတေဲ့မကောငျးတဲ့အခိုကျအညံ့တှအေားလုံး ပါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ) (၂)လတဈခါလုပျပါ။အရေးအကွောငျးကိစ်စပျေါလြှငျထပျလုပျပါ။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၅)နာရီ(၄၀)မိနဈတိတိတှငျ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့၊ အုနျး(၆)ညှနျ့ ပေါငျမုနျ့(၅)ခပျြကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
အကြှနျုပျ၏ ဣဌသဘောဆောငျသညျ့ ကောငျးသောဟောခကျြမြား သှေးထှကျအောငျမှနျကနျ၍ ၊ အနိဌသဘောဆောငျသညျ့ မကောငျးသောဟောခကျြမြား တကျတကျစငျအောငျ လှဲမှားပါစသေတညျး။ …. ။
နှဈဟောငျးကုနျ၍ နှဈသဈကိုကွိုလငျ့သော နှဈသဈကူးအခါသမယ၏ စိတျလှုပျရှား ရငျခုနျဖှယျကောငျးလှသော ဧပွီလ၏နရေ့ကျမြား
2 Replies to “မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး”
Previous PostPrevious အောင်ကြောင်းဝေဖြာ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာယတြာ
Next PostNext မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်